Syberia iyo Syberia 2, oo iib ah waqti kooban Mac App Store | Waxaan ka socdaa mac
Syberia iyo Syberia 2, waxaa lagu iibinayaa waqti kooban Mac App Store
Ciise Arjona Montalvo | | Ciyaaraha, Mac App Store
Ciyaaraha Syberia y Syberia 2 waa la iibinayaa waqti xaddidan in Mac App Store kaliya 1,99 ciyaar kasta. Qiimaha ay ciyaaruhu sida caadiga ah leeyihiin waa 11,99 y 14,99 siday u kala horreeyaan, markaa in ka yar shan yuuro labadan kulan ee waaweyn adiga ayaa iska leh. Labada kulan ayaa gabi ahaanba ku jira Español.
Labada ciyaaroodba waxaad galaysaa maqaarkaaga hoostiisa Kate lugeeyaha, garyaqaan da 'yar oo han leh oo ka yimid New York, halkaasoo qaybta hore lagu aaminay waxa marka hore u muuqda hawl fudud oo fudud: joogsi deg deg ah oo lagu maareeyo iibinta duq hore warshad automaton wuxuu ku dhuumaaleystaa buuraha Alpine ka dibna wuxuu ku noqdaa dalkiisa Mareykanka, laakiin arrimuhu sidii hore uma muuqdaan.
Qaybta labaad, waxaad guda geleysaa safar cusub si aad u hesho ugu dambeeya ee mammoths halyeeyga ah ee Syberia oo ku dhex yaal bartamaha koon dheer oo la ilaaway, halkaas oo qarsoodi weyn ay ka dhici doonaan.
Jilayaasha xiisaha leh iyo kuwa xiisaha leh.
Xaglaha kamaradda-qaabka shineemooyinka, dhaqdhaqaaqyada iyo qaabeynta.
Jawi gaar ah oo aan la barbardhigi karin.
Sheeko asal ah oo xiiso leh.
Jilayaal cusub oo hodan ah oo xiiso leh oo leh deegaanno cusub oo macquul ah oo faahfaahsan 3D.
Halxiraalihii asalka ahaa ee si buuxda u isku dhafanaa ee tijaabin doona xirfadaha ciyaartoyda iyadoo loo marayo ciyaar.
Waxaad ka iibsan kartaa set ee Syberia toos uga Mac App Store, adigoo gujinaya xiriirka soo socda.
Waxaad ka iibsan kartaa set ee Syberia 2 toos uga Mac App Store, adigoo gujinaya xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ciyaaraha » Syberia iyo Syberia 2, waxaa lagu iibinayaa waqti kooban Mac App Store
Niyad jab, tani waa qorshaha cusbooneysiinta iPhone-ka ee ay Apple ka hirgalisay Spain
Halxiraalaha 3D ee ZeGame hadda Steam leh demo iyo qiimo dhimis